Content တွေကို AI နဲ့ ရေးမယ် ဆိုရင်ဖြင့် …. - Thaw Zin
အချိန်တွေ သိပ်ပေးစရာမလိုပဲ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ Content ကောင်းကောင်းတစ်ခုကို AI နဲ့ ဖန်တီးလို့ ရတယ်ဆိုရင် Content Writers တွေ အတွက် ရင်ခုန်စရာ တစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
Digital Technology ခေတ်မှာ AI (Artificial Intelligence) ရဲ့ အရေးပါမှုကလည်း တော်တော်ကြီးမြင့်မားလာ တော့ တစ်ချို့ သော Human Processes တွေကို AI အသုံးပြုပြီး Rotobts တွေနဲ့ အစားထိုးလုပ်ဆောင်လာကြတာပါ။ eg. chatbots, တို့ self-driving cars တို့ လက်ရှိ အသုံးပြုနေကြတာတွေ စသဖြင့်ပေါ့။ လူကိုယ်တိုင် လုပ်ရသော အလုပ်တွေကို AI အကူအညီဖြင့် အချိန်တို အတွင်း ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ လူ တွေက ကြိုးစားလာကြတာပါ။
ကျတော်တို့ SEO အတွက် Content တွေကို AI အကူအညီဖြင့် ရေးမယ်ဆိုရင် ကျတော်တို့ အနေနဲ့ ဘာတွေသိထားဖို့ လိုမလဲပေါ့။ အဆင်ပြေ မပြေ၊ နောက်ပြီး AI နဲ့ ရေးလိုက်တဲ့ Content က SEO အတွက် အလုပ်လုပ်ရဲ့လား ဒါတွေကို ကျတောတို့ သိထားဖို့လို အပ်ပါတယ်။
အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းပါပဲ Content ကောင်းကောင်းတစ်ခု ရဖို့ ဆိုတာ ကျတော်တို့ တော်တော်ကြီးကို အချိန်တွေပေးရတာပါ။ Facebook တင်တဲ့ Content တွေက ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ User တွေကို အတင်းဆွဲဆောင်လို့ ရပေမယ့် Google အတွက်ကတော့ SEO Quality Content ဖြစ်ဖို့ သေသေရှာရှာ စနစ်တကျ ရေးဖို့ လိုအပ်တာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် Own Content Creation အပြင် တခြားများစွာသော Content Tips တွေဟာလည်း Ranking အတွက် အကျိုးပြုလာတာတွေ ရှိလာပါတယ်။
ကျတော်က SEO နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Content Format ကိုတာသိပေမယ့် Content ကောင်းကောင်းရေးတတ်သူတစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ရေးနေကျမဟုတ်တော့ စာတစ်ပိုဒ်ရေးရတာတောင် သူများတွေထက် အချိန်ပိုပြီးပေးနေရသလိုခံစားရတာပါ။ အမြဲလိုလို SEO အတွက် Content Guideline Updates တွေကို ဖတ်ရင်းတဲ့ “SEO Content Creation with AI” ဆိုတာမျိုး တစ်ခုမှာသွားတွေ့တယ်၊ အဲ့ဒါကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားမိသွားတယ် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာလည်း အဲ့ဒါကို ယုံသလိုလို၊ မယုံသလိုလို။ ဒါမယ့် အရမ်းစူးစမ်းချင်နေပြီ အဲ့ဒါကို၊ တကယ်လို့သာ အဆင်ပြေခဲ့ရင် ကျတော် SEO Services ပေးနေတဲ့ Clients တွေ အတွက် Website Contents တွေကို ကိုယ်တိုင်ရေးစရာမလိုတော့ပဲ လိုအပ်ရင် Content Optimization လောက်ပဲ လုပ်ရင် အဆင်ပြေပြီပေါ့ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး။ SEO ရဲ့ Main Factor က Content ပဲလေ….
ဒါနဲ့ ကျတော် website အတွက် Content တွေကို AI နဲ့ ရေးလို့ ရနိုင်မလားဆိုပြီး Google မှာ ရှာကြည့်တယ်။ In-Site ထဲမှာ “Reviews” လည်းကောင်းကောင်း နဲ့ online မှာလည်း Popular ဖြစ်တဲ့ Tool တစ်ခုသုံးလိုက်တယ်။ Staring Plan အနေနဲ့ USD 20၊ စာလုံးရေ 500 ကို USD2လောက်ရှိတော့ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါတယ် အတွေ့ကြုံလည်း ရအောင်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတာပေါ့။
ကျတော့် အတွက် အဖြေကတော့ –
ကျတော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ “Keywords” ရဲ့ Results တွေက “ထင်ထားခဲ့သလို အဆင်မပြေပါဘူး၊ Keywords ရဲ့ တစ်ချို့ Content တွေဆို အကုန်တလွဲတွေပါ” ..
တကယ်တော့ Content ကို AI နဲ့ ရေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရဲ့ Business နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး General Keyword အတွက် Content Idea နဲ့ topic တစ်ချို့ ယူပြီး အသုံးပြုလို့တော့ ရပါလိမ့်မယ် ဒါမယ့် Quality Content ကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ AI Tools တွေ ရေးပေးတဲ့ ပုံစံက ကိုယ့်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ Keywords (သို့) Topics တွေအတွက် သူနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ Online မှာ ရှိတဲ့ Content ကို Rewrite လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံပါ။
ကျတော်လည်းစမ်းသုံးပြီးလို့ ၁ ပတ်အကြာ SEJ မှာ အဲ့ ကျတော်သုံးခဲ့တဲ့ Tool နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဆင်မပြေတဲ့ Content ပုံစံတွေကို AI နဲ့ SEO Content အကြောင်းတွေ ရှင်းပြပြီး ရေးထားသေးတယ်။
တစ်ချို့ AI Tools တွေကတော့ ကိုယ် SEO ကောင်းချင်တဲ့ Keyword အတွက် Email နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Live chat နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Discussion လုပ်ပြီး ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ Content Format ကို ပြောပြလို့ ရတယ်။ ဒါမယ့် အဆင်မပြေပါဘူး Content တွေ က အကုန်လုံး တလွဲတွေကြီးပါပဲ။
Topic (or) Keywords ကို AI နဲ့ လုပ်လိုက်တော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ SEO Format ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ တစ်ကယ်ကို မလွယ်သေးတာပါ။ အခုနောက်ပိုင်း Google က နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ Quality Content ကို စစ်လာတာဖြစ်တဲ့ အတွက် AI နဲ့ ရေးဖို့ က အစ်ချို့ တစ်ချက်အလက်တွေက ပိုဝေးပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ Content သည် Human Feeling နဲ့ ရေးရတာဖြစ်တဲ့ အတွက် AI သည် မည်မျှပင် အားကောင်းလာစေကာမှု Human writer ကိုယ်တိုင် ရေးတဲ့ Content ကို Robot က ဘယ်လိုမှ အစားထိုးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
“Robots are just Robots They don’t have emotions, memories, or preferences, and they don’t love or hate anything.” By #Julia_McCoy
“Human feeling Content တွေကို AI နဲ့ အစားထိုးဖို့ ဆိုတာ မလွယ်လောက်သေးပါဘူး ဖြစ်ကောင်းလည်း ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဒါမယ့် နောင် နှစ်ပေါင်း မြောက်များစွာစောင့် ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။” ဆိုပြီး Forum တစ်ခုမှာလည်း Digital Specialist တစ်ယောက်က discussion လုပ်ထားပါသေးတယ်။